Ukucoca iifoto zokuqala ze-Honor 20 Pro
I-Honor 20 Pro sisiphelo esiphakamileyo esilandelayo sophawu lwesiTshayina. Iiveki ezimbalwa ezidlulileyo umhla wokufayilwa wachazwa Olu luhlu lutsha lweefowuni ezivela kumenzi. Uluhlu esisele silwazi luyimodeli elula kunazo zonke, i-Honor 20 Lite, eyanikezelwa ngokusemthethweni Zimbalwa iintsuku ezidlulileyo. Ngoku, sinazo iifoto zokuqala zalo mzekelo wePro.
Sele kwiposta yokubonisa kuye kwachazwa ukuba olu luhlu beza kufika benomngxuma kwiscreen. Ngoku, le mifanekiso yokuqala yaseburhulumenteni ye-Honor 20 Pro iyasivumela ukuba siqinisekise ukuba kuya kuba njalo. Ukubheja okuphezulu kolu lwakhiwo, oluselunokuthenjwa kwifowuni ye-Android.
Ke ngoko, sifumana uyilo iyafana nembeko V20. Kude kube ngoku besingenazo iifoto malunga nale Honor 20 Pro, esinokuthi ngoku siyibone ngokucacileyo siyabulela koku kuvuza. Kule meko, umngxunya imi ngasekunene kwiscreen. Umngxunya awukho mkhulu kwaye sinekhamera yangaphambili.
Emnxebeni siyayibona loo nto iza ne-EMUI 9 njengobume bokwenza ngokwezifiso. Ukongeza, kuyabetha ukuba enye yeapps efakwe ngenxa yeziphene kuyo yiFortnite. Asazi ukuba oku kuyakuba njalo, kodwa kubonakala ngathi kuya kuba nomdlalo okanye ubuncinci ikhonkco lokukhuphela kuyo.
Ngelo xesha akukho datha kwii-specs Yintoni esinokuyilindela kule Mbeko ye-Pro 20. Nangona kunokwenzeka ukuba kwezi veki kuya kubakho ukuvuza, ukuze sikwazi ukufumana umbono malunga nale fowuni kuphawu lwesiTshayina. Ngethamsanqa, intetho yakho iiveki nje ezimbini.
Nangona kwezi veki bekukho amarhe acebisayo ukuba inokuba njalo Izinto ezininzi ezifanayo ezifanayo neHuawei P30. Kodwa siza kushiya amathandabuzo ngalo Meyi 21 xa le Honor 20 Pro iziswa ngokusesikweni eLondon, kunye neNhlonipho 20.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ukucoca iifoto zokuqala ze-Honor 20 Pro
Imisongo yaBadala: Iibhlethi ngoku ziyafumaneka kuye wonke umntu xa ephuma kwi-beta
Spotify kuvavanywa ukwamkelwa kwelizwi kwiapp